> Resource > jailbreak > Sida loo JAILBREAK iPhone 5
iPhone iyo iPad ku jira hindisooyin soo gali-. Waxaad ku rakiban kartaa oo kaliya barnaamijyadooda Apple ayaa ogolaaday. Laakiin si ay u JAILBREAK mahad, waxaad isku dhac karaan kuwa qufulka iyo isticmaali casriga ah ee waxa ka iman kara buuxa. Plus, waa sharci in JAILBREAK iPhone ah.
Ka hor inta aanan u guda galay arrinta, waa fikrad wanaagsan inaad dib aad iPhone 5 hore. Inkastoo nidaamka JAILBREAK waa qummaati oo fudud, weli waxaa jira boqolkiiba hooseeyo fursad in ay qalad noqon karo. Haddii ay taasi dhacdo, waxaad had iyo jeer soo celin kartaa iPhone 5 waxa ay hore u ahayd iyada oo la isticmaalayo file gurmad ah.
Waxaa jira 2 siyaabo in ay dib u aad iPhone 5, mid ka mid ah hore waa in ay si toos ah u samayn ka iPhone by siyoodba saldhigyada> iCloud> Kaydinta & kaabta iyo garaac "Back Up Hadda". Ayaa mid ka mid labaad waa iyada oo la isticmaalayo Lugood on your computer, xirmaan iPhone 5 si aad u computer, u furan Lugood, guji badhanka iPhone, ee bogga kooban, guji "Back Up Hadda".
IPhone 5 markii hore la yimaadeen macruufka 6, sidaas waxay ku xiran tahay nooca aad qabto; waa inaad raacdaa nidaamka jailbreaking in waafaqayaan macruufka version. Si aad u hubiso oo version aad leedahay, ka screen guriga aad iPhone 5, ka jaftaa saldhigyada> guud> ku saabsan iyo hoos u dhaqaaq version.
Jailbreak iPhone 5 on macruufka 6 la software evasi0n (version kasta filan 6.1.4)
Talaabada 1: Download software Evasi0n ah
Talaabada 2: Hel file Evasi0n oo fur u
ah Talaabada 3: Isku aad iPhone 5 ilaa kombiyuutarka
Tallaabo 4: Ku bilow ah jailbreaking habka
Talaabada 5: Sug nidaamka si ay u dhamaystiraan
Talaabada 6: Unlock aad iPhone 5 oo guji app evasi0n ku
Jailbreak iPhone 5 on macruufka 7 la evasi0n 7
Talaabada 1: habayn ka iPhone 5, haddii uu jiro saar hal
Talaabada 4: Isku aad iPhone 5 aad Mac
Talaabada 6: Unlock aad iPhone 5 guji evasi0n 7 app
J ailbreak iPhone 5 on macruufka 6 la software evasi0n (version kasta filan 6.1.4)
Marka hore waxaad u baahan doontaa inaad raadiso software evasi0n ku engine goobid iyo download it. Ka taxadar inaad kala soo baxdo version saxda ah ee evasi0n u madal saxda ah (daaqadaha ama Mac).
Talaabada 2: Hel file Evasi0n iyo furi
Marka download waa dhameysatay, u version MAC, click double ku evasi0n.dmg iyo jiididda iyo hoos u app evasi0n ku meel kasta aad Mac (tusaale ahaan: desktop-ka). Si aad u abuurtaan codsiga, double click on app evasi0n ah.
Talaabada 3: Isku aad iPhone 5 ilaa kombiyuutarka
Fadlan gab habayn ku saabsan iPhone 5 haddii aad mid ka mid ah haddii aan habka JAILBREAK ku guuldareysto May (Settings General habayn Lock On habayn dami), ka dibna lagu xiro qalabka si aad u computer ah.
Tallaabada 4: Ka bilow habka jailbreaking ah
Evasi0n ogaan doonaa iPhone iyo xusuusanayaa version firmware macruufka oo la socda. Riix JAILBREAK button aad u bilowdo hawsha.
Ka dib markii dhag siinaya batoonka JAILBREAK ah, qalab siin doonaa update nidaamka marxalad kasta. Fadlan sug ilaa dhammayn. Dhanka kale, ha furin Lugood sida ay wax u dhimayaan laga yaabaa in geeddi-socodka.
Talaabada 6: Unlock aad iPhone 5 guji app evasi0n ah
Marka hal dhibic, waxaad heli doontaa fariin ku war aad in lagu furo aad iPhone. Fadlan furo aad iPhone 5 guji app evasi0n ah. Sidoo kale, ha la xidho software evasi0n ah, sida habka jailbreaking weli weli ma dhamaan ..
The screen iPhone tegi doonaa madow oo ka dibna waxa reboot doonaa ahaantiisa, ma noqon walwal maadaama ay tani waa iska caadi. Marka iPhone ayaa reboot, waxaad arki doontaa app Cydia telefoonka ah, aad si guul leh jailbroken ayaa aad iPhone 5.
Tallaabo 7: fidinno Cydia.
Si Mudanayaasha waa mid aad u fudud, guji kaliya app hal mar oo si toos ah laftiisa initialize doonaa. On furitaanka hore, app ka dhigi doonaa iPhone 5 reboot ka dib samaynta. Ka dib markii rebooting, kaliya mar kale ka jaftaa on app Cydia ay u soo bixi lahaayeen barnaamijyadooda weyn in aadan heli doonaa app dukaanka Apple.
Talaabada 1: habayn ka iPhone 5 Ka qaad haddii ay jirto mid ka mid
Fadlan gab habayn ku saabsan iPhone 5 haddii aad mid ka mid ah. In sidaa la yeelo, ka screen guriga aad iPhone 5, garaac Settings General habayn Lock On leexo habayn Off, ka dibna lagu xiro qalabka si aad u computer ah.
Connect aad iPhone 5 aad Mac la cable USB / iftiiminta ay bixiyeen la telefoonka.
Evasi0n 7 ogaan doonaa iPhone 5 iyo xusuusanayaa version firmware macruufka oo la socda. Riix badhanka JAILBREAK ah u bilowdo hawsha.
Talaabada 6: Unlock aad iPhone 5 iyo guji evasi0n 7 app
Marka nidaamka dhamaato, waxaad heli doontaa fariin ku war aad in lagu furo aad iPhone. Fadlan furo aad iPhone 5 iyo guji evasi0n 7 app. Sidoo kale, ha la xidho ee evasi0n 7 software on your computer, sida habka jailbreaking waa weli dhammayn.
Haddii nidaamka uga istaagi dhexe ama haddii aad iPhone 5 noqday deganayn ama aan sabab lahayn qaar ka mid ah macluumaadka ku saabsan qalab aad luntay / tirtirto inta ay socoto, mar walba waa in aad soo kaban karaa iyadoo la isticmaalayo software ah kabsaday sida Dr.Fone ee macruufka. Waa maxay weyn oo ku saabsan Dr.Fone ee macruufka ah waa in ay soo kaban karto xogta lumay si toos ah uga iPhone iyo / ama ka file ah oo gurmad ah.
Waxaad riix kartaa on this link: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recoveyr u Win) ama tan mid Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) in ay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida inuu ka soo kabsado aad iPhone 5 ama guji badhanka hoose si aad u dejisan iyo tijaabin codsiga .